Shirkadihii shidaalka Soomaaliya Doonayay oo laga cabsi qabo inay ka laabtaan, 2 sababood dartood. – Xeernews24
Shirkadihii shidaalka Soomaaliya Doonayay oo laga cabsi qabo inay ka laabtaan, 2 sababood dartood.
Qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku dooneyso inay ku iibiso xirmooyin ka mid ah shidaalka lagu tuhmayo badda Soomaaliya, kadib shirkii shidaalka Soomaaliya ee London, ayaa waxaa hadheeyey mugdi cusub.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, ayaa sheegay in shirkadaha daneynaya shidaalka Soomaaliya ay ka laba-labaynayaan inay maal-gelin buuxda ku sameystaan shidaalka Soomaaliya laba sabab dartood:-
Dhinaca kale, caqabadda kale ee taagan ayaa ah in baarlamaanka Soomaaliya uusan weli ansixin sharciga shidaalka dalka, taasi oo ayada oo aan dhicin aysan dowladda saxiixin karin heshiis wax soo-saar wadaagis ah – Production-Sharing Agreements (PSAs).
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/343.jpg 250 343 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-16 08:43:342019-03-16 08:43:34Shirkadihii shidaalka Soomaaliya Doonayay oo laga cabsi qabo inay ka laabtaan, 2 sababood dartood.
Barakacayaasha Danlahelay ee degmada Afdam yaa umiciina? Xogta iyo Ujeedada Rasmiga ee Madxweynaha Jabuuti Maanta ku tagaayo magaalada...